Paweł M., Qoraa SmartMe ah
Posts by Paweł M.
Dom » Maqaallada Waxaa daabacay Paweł M.
saacad caqli badan, meizu, meizu daawasho, smartwatch
Shirkadda Meizu waxay hadda isu diyaarineysaa inay adduunka u soo bandhigto saacaddeeda casriga ah. Bixinta la shaaciyey waxay si cad u muujineysaa in Meizu Watch ay u ekaan doonto wax soo saarka Apple. Suuqaan aadka u tartamaya waxaan ka heli doonaa qaar badan oo ka mid ah noocyadan ...
TP-Link waxay ka cusbooneysiineysaa kamaradaha miisaaniyadda taxanaha Kasa Spot
kamarad caqli badan, camera amniga, kasa, booqo diiwaanka lacagta, kaalinta diiwaanka lacagta mr, tp-link
Guri caqli leh sidoo kale macnaheedu waa ammaan. TP-Link sifiican ayey uga warqabtaa tan waxayna hagaajinaysaa laba kamaradood oo ka socda khadka miisaaniyada ee loo yaqaan Kasa. Maxaa lagu hagaajiyay noocyada cusub ee qalabkan? Kaamirooyinka casriga ah TP-Link Kasa ...
Amazon waxay cusbooneysiineysaa Echo Show 5 iyo Echo Show 8 bandhigyo
Amazon, echo show 5, echo show 5 carruur daabacaad, echo show 8, bandhig smart
Amazon waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso labadeeda bandhig ee casriga ah. Noocyada qalabka ee 2021 waxaa lagu qalabeyn doonaa, kuwo kale, kaamirooyinka la hagaajiyay iyo shaqooyin gebi ahaanba cusub. Horumarka hadda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah laba qalab - Echo Show 5 ...
Netatmo Video Doorbell oo leh taageerada GA iyo Amazon Alexa
Dawan, gambaleelka albaabka, netatmo, Netatmo Albaabka, codka smart smart, video gambaleelka albaabka
Wakiilada Netatmo ayaa hada ku dhawaaqay in Smart Video Doorbell ay dhawaan la jaan qaadi doonaan kaaliyeyaasha codka ugu muhiimsan ee laga heli karo suuqa. Cusbooneysiinta ayaa dhowaan bilaabmi doonta. Maalintii laga soo galay suuqa, aaladda ka socota Netatmo waxay bixisay ...
Xiaomi, OPPO iyo Vivo ayaa xiiseynaya HarmonyOS?
android, wada noolaanshaha, wada noolaanshaha, huawei
Cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Huawei awgeed, soo saaraha Shiinaha wuxuu doonayaa inuu ka madax banaanaado nidaamka hawlgalka Android. Waxay u egtahay mid hami sare leh, laakiin qorshayaasha shirkadda waxaa ka mid ah joogitaanka inta badan suuqyada ...
Sirdoonka macmalka ah ee mashiinnada dharka lagu dhaqo ee Samsung
ai, xakamaynta ai, makiinadaha dharka lagu dhaqo, Samsung, sirdoon macmal ah
Sirdoonka macmalka ah ayaa door muhiim ah ka qaata nolosheena. Ka faa'iideysiga faa'iidooyinkeeda waxay ka caawisaa, iyo waxyaabo kale, fulinta howlaha maalinlaha ah. Mashiinnada cusub ee Samsung lagu dhaqo waxay isku daraan habboonaanta isticmaalka iyo hagaajinta biyaha iyo isticmaalka saabuunta. Soo-saareyaasha ayaa aad u jecel ...
Huawei wuxuu ka shaqeynayaa koontaroole loogu talagalay ciyaaraha VR
Waxaa hadda la shaaciyey in shirkadda Huawei ay dhowaan soo gudbisay rukhsad loogu talagalay xakamaynta ciyaarta oo la jaanqaadeysa dhegaha dhabta ah Waxay u muuqataa in soo saaraha Shiinaha uu dhawaan rabo inuu wax badan ku jahwareeriyo arrintan si joogto ah u socota ...